IBloomwell Group ithola uxhaso olukhulu lwembewu olwake lwatholakala emakethe ye-cannabis yaseYurophu
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » IBloomwell Group ithola uxhaso olukhulu lwembewu olwake lwatholakala emakethe ye-cannabis yaseYurophu
IBloomwell Group ivale ngempumelelo umxhaso woxhaso lwembewu olungaphezulu kwamaRandi ayizigidi eziyizigidi eziyizigidi eziyizigidi zamarandi — okutshalomali lwembewu olwaziwa kakhulu esidlangalaleni lwenkampani yensangu yaseYurophu kuze kube manje. Umtshalizimali oholayo ngumhlinzeki wemali ekhulayo waseMelika iMeasure 10 Venture Partners, ongoti ekutshalweni kwemboni yensangu. Phakathi kwabanye abatshalizimali, ingelosi yebhizinisi uDkt Reinhard Meier utshala imali futhi ngesikhwama sakhe seVenture Capital Investors; noMnu Weber we-FPS wasebenza njengomeluleki wezomthetho kuBloomwell.
IBloomwell Group ivale ngempumelelo umhlanganiso woxhaso lwembewu olungaphezulu kwe- $ 10 million dollars-utshalomali lwembewu olwaziwa kakhulu emphakathini lwenkampani ye-cannabis yaseYurophu kuze kube manje. Umtshalizimali oholayo ngumhlinzeki wemali ekhulayo waseMelika iMeasure 8 Venture Partners, ongoti ekutshalweni kwemboni yensangu. Phakathi kwabanye abatshalizimali, ingelosi yebhizinisi uDkt Reinhard Meier utshala imali futhi ngesikhwama sakhe seVenture Capital Investors; noMnu Weber we-FPS wasebenza njengomeluleki wezomthetho kuBloomwell.
Ngokuhambisana nalokhu kumenyezelwa, iBloomwell Group, ehlanganisa i-Algea Care, okuyinkampani ehamba phambili ye-telemedicine yaseYurophu yokwelashwa kwe-cannabis ngokwezinombolo zeziguli, iyazibeka kabusha njengenkampani ephethe, iyivumela ukuthi yakhe, ithenge noma ithole izinkampani zensangu.
“NgeBloomwell, siguqula ukunakekelwa kwezempilo ngokusebenzisa i-digitalization namandla we-cannabis yezokwelapha kanye neminye imithi yemvelo. Izinkampani zethu zephothifoliyo zizogxila ngokuphelele kundlela yabathengi kuyo yonke intengo yenani lezokwelapha, ngaphandle kokutshalwa. Isikhathi semithi esekwe ngokwemvelo siqala manje kanti uBloomwell uyahola, ”kusho uNiklas Kouparanis, oyi-CEO & Co-Founder weBloomwell Group.
Kungakapheli unyaka, iBloomwell Group isikhule yaba nabasebenzi abayi-160, nemali ebekiwe ebingaba yizigidi ezinhlanu zama-euro ngo-2021. Ngaphezu kukaNiklas Kouparanis, oyi-CEO, ongusomabhizinisi kanye nophayona we-cannabis, leli bhodi liqiniswa ngumakadebona wezocucu uDkt Reinhard Meier, owaba umsunguli kuholele iTeleclinic ekuphumeni, uCo-Founder uSamuel Menghistu noBoris Jordan, abalingani abasungula iMeasure 8 Venture Partners.
Ibhodi elifezekile lihlanganisa izici kwezokwelapha, ukufakwa kwedijithali, insangu, ukutshalwa kwezimali nokwakhiwa komkhiqizo kuyo yonke imikhakha yezimakethe.
UDkt. Reinhard Meier, UMqondisi we-Radiology eWestpfalz Klinikum, owasungulwa phambilini futhi wafaka imali ezinkampanini eziningi zezokwelapha kanye nokuqalisa izimali eziningana ze-VC.
UBoris Jordan, Ngokutholwa kwe- $ 285M ye-EMMAC, iCuraleaf ingowokuqala futhi ukuphela kweMSO yokuba nobukhona obuzwakalayo eYurophu. IJordani ithathwa njengomunye wochwepheshe abaziwa kakhulu be-cannabis eNyakatho Melika futhi ibhekele ukusebenza kweCuraleaf, okuyinkampani ethengisa esidlangalaleni insangu emhlabeni wonke, kanye nokutshalwa kwemali endaweni yesikhala nge-Measure 8 Ventures.
UNiklas Kouparanis, usomabhizinisi olandelanayo, kanye nephayona embonini yezokwelapha i-Euopean.
USamuel Menghistu, ehola ezimpambanweni zemigwaqo yamabhange, yotshalo-mali, okwenziwe nge-M & A nama-IPOs isikhathi esingaphezu kweminyaka eyisithupha.
“Ukulindela okuphezulu kwabatshalizimali kanye nezinkampani zomhlaba wonke embonini ye-cannabis yase-Europe akuzange kugcwaliseke selokhu kwamiswa 'i-Cannabis Law' ngoMashi 2017, yize imakethe iqhubekile nokukhula kahle. NgeBloomwell, sikhombise kungakapheli unyaka owodwa ukuthi kungakanani okungafinyelelwa ngokusebenzisa inhlawulo yebhizinisi. Imboni ye-cannabis yaseYurophu igcwele amathuba okuthuthuka kwesikhathi esizayo kukaBloomwell. Ngenkathi imakethe ihlanganisa kwenye indawo, zonke izimpawu zikhomba ekukhuleni nasekukhuliseni ngokuhlanganiswa kwensangu, ukuqamba izinto ezintsha, ukwenza i-digitalisation kanye ne-D2C enamandla noma indlela eqonde ngqo ezigulini, ”kusho u-Anna-Sophia Kouparanis, Co-Founder weBloomwell Group.
“IJalimane iyimakethe ehamba phambili yaseYurophu yokuthola insangu yezokwelapha kanti iBloomwell Group ikufakazele kungakapheli unyaka ukuthi ingakhomba futhi ilinganise izixazululo ezintsha kule makethe entsha yokukhula ukuze kusizakale iziguli. Insangu inekusasa eliqhakazile e-Europe futhi silangazelela ukuxhasa nokusebenza neBloomwell Group njengoba iqhubeka nokukala, ”kusho uBoris Jordan, iFounding Partner of Measure 8 Venture Partners kanye noSihlalo oPhethe weCuraleaf.
“Ukufakwa kwedijithali kuyisihluthulelo sokugcina ngokubeka iziguli maphakathi nohlelo olungasebenzi kahle lwezempilo. I-Algea Care, inkampani yephothifoliyo yaseBloomwell, isivele yafakazela ukuthi inolwazi nobungcweti ukwenza ngcono inhlalakahle nempilo yansuku zonke yezinkulungwane zeziguli emkhakheni olawulwa kakhulu ngokusebenzisa insangu yezokwelapha kanye nokwenza i-digitalization kanye nezinga eliphakeme kakhulu lomsebenzi , ”Kusho uDkt Reinhard Meier.